प्रधानमन्त्रीले माघ २३ को सभामा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न लागेको कुरा साँचो हो?::Point Nepal
प्रधानमन्त्रीले माघ २३ को सभामा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न लागेको कुरा साँचो हो?
काठमाडौँ – नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालबाट धर्म निरपेक्षता खा,रेज गर्न थालेको ज,बरजस्त आ,रोप लगाएको छ ।
राजावादीहरुसँग मिलेर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आ,रोप छ । यो समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओली राजावादीहरुको भीडमा बसेर उल्टो बाटो हिँडिरहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा वि,घटनवि,रुद्ध आज माइतीघर मण्डलामा आयोजित धर्नालाई सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डेले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने कोसिस ओलीले गरिरहेको आ,रोप लगाउनुभयो । २३ गते ओली समूहको काठमाडौँमा हुने सभामै प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने घोषणा गर्ने सूचना आफूलाई प्राप्त भएको नेता पाण्डेको दा,बी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन पहिले पशुपतिनाथको पूजा गर्नुभएको थियो भने शनिबार चितवनमा पुगेर राम मन्दिर बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । रामजन्मभूमि नेपालमै रहेको दा,बी गर्दै ओलीले सक्कली राष्ट्रवादी भन्नेहरुले सोही क्षेत्रबाट चुनाव जिते पनि उक्त विषयमा मुख खोल्न नसकेको आ,रोप लगाउनुभएको थियो ।
रामजन्मभूमि नेपालमै रहेको र भारतमा रहेको अयोध्या नक्कली रहको बताएर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका हिन्दुहरुको मत आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेको आँकलन नेपाली राजनीतिमा भइरहेको छ । यहीबीचमा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिको पूजा गरेपछि त झन यो आशंकामा थप बल पैदा भएको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले ओलीले धर्म निरपेक्षता खा,रेज गरेर हिन्दु राज्य घोषणा गर्ने अभियान थालेको भनी गरेको सार्वजनिक टिप्पणीमा सत्यता रहेको संकेत ओली समूहका नेताहरुले दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेता गोकुल बाँस्कोटाले नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दुहरु छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले ख्याल गर्ने बताउनुभयो । तर अबको निर्वाचनमा केपी ओलीले हिन्दु धर्मको एजेण्डा बोक्ने कि नबोक्ने भन्नेमा आफू जानकार नरहको उहाँले बताउनुभयो । तर निर्वाचनमा पार्टीका आ–आफ्ना एजेण्डा पक्कै हुने उहाँले बताउनुभयो ।
संसद वि,घटन सही हो भन्ने सन्देश दिन यही माघ २३ गते नेकपाको ओली समूहले काठमाडौँमा जनसभाको आयोजना गर्दै छ । र यो सभामा ओलीले अहिलेसम्म नबोलेको नयाँ कुरा बोल्ने तयारी भइरहेको उनीपक्षीय नेताहरुको दा,बी छ ।
यही कुरालाई ओलीका विपक्षीहरुले हिन्दु राष्ट्र घोषणासँग जोडेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । तर अबको निर्वाचनमा केपी ओलीले हिन्दु धर्मको कार्ड खेल्ने कुरा पक्का रहेको उनीपक्षीय नेताहरुको अभिव्यक्तिले पनि संकेत गरिरहेको छ ।
ओली समूहका नेता सत्यनारायण मण्डलले केपी ओलीले हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने कुरा फरक रहेको तर अब धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने आफूहरुको अ,डान रहेको बताउनुभयो ।
यसअघिको निर्वाचनमा राष्ट्रवादको नारा दिएर सत्ताको सिंहासनमा पुगेको नेताका रुपमा केपी ओलीलाई चित्रण गरिन्छ । तर अहिले ओलीको त्यो राष्ट्रवाद स्ख,लित भएपछि अर्काे चुनावका लागि उहाँले हिन्दु धर्मको कार्ड खेल्ने तयारी गरिरहेको उनका आ,लोचकहरु बताउँछन् ।